टाउकोमा कु टे र आँखामा पट्टी बाँधेछ, पछि कहाँ गएर आँखा खुल्यो ? कसरी फोन गर्न भ्याई ?’ – Sapana Sanjal
टाउकोमा कु टे र आँखामा पट्टी बाँधेछ, पछि कहाँ गएर आँखा खुल्यो ? कसरी फोन गर्न भ्याई ?’
July 6, 2021 413
Sapana Sanjal : राप्ती नगरपालिका–३ की ४५ वर्षीया अम्बिका भण्डारीका आँखा ११ दिनदेखि ओभानो भएका छैनन्। रुँदा–रुँदा आँखा राता भएका छन्। छिनमै भक्कानिन्छिन्, छिनमै चुप लाग्छिन्। शरीर कमजोर भएर टाउकोमा फेटा बाँधेकी छिन्। आफूलाई सम्हाल्नै सकेकी छैनन्। आफन्त र छिमेकी आउँछन्, सान्त्वना दिन्छन्। उनीहरू आँखाभरि आँसु बनाउँछन्।
Nextआज मंगलबार ह्वात्तै बढ्यो सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ